XOG-Shirkii Muqdisho oo dib laysugu laabtay, maamulada oo isku garab noqday & Farmaajo oo kusoo biiriyey Mahdi & Guddoomiye Mursal.
September 17, 2020 Xuseen 8
Waxaa xalay markale kulan yeeshay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada oo shalay kulamadoodii ku kala kacay kadib markii khilaaf xoogan uu dhinacyada soo kala dhexgalay.
Shirka oo ahaa mid xasaasi ah waxaa habeenimadii xalay ku soo biiray guddoomiyaga golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo sii-hayaha ra’iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa la sheegay inuu shirka ku matali doono beelaha degan gobolada waqooyi oo aan lahayn maamul katirsan Soomaaliya kuna matala shirarka Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaystay in heshiis walba oo lagu gaaro shirka uu horgeyn doono golaha shacabka waxaana looga fursan waayey in lagu soo biiriyo golaha shacabka si uu talo ugu yeesha golaha intiisa kalena uga dhaadhiciyo.
Arrintaan waxa ay sidoo kale, imaanaysaa xilli inta badan maamuladu ay isku aragtid noqdeen waxaaana ku soo biirista Mursal iyo Mahdi ay taageero u noqon doontaa madaxweynaah Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xogihii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maamul goboleedyadu isku raacsan yihiin in la yareeyo tirada ergada codeyneysa, in meesha laga saaro hanaanka xisbiyada iyo in doorashadu ay ka dhacdo hal magaalo.
Haddii si kastaa loogu tanaasulo Deni wan iyo Axmed dhuxul,aragtidoodu waa Nairobi ayaan lasoo tashanaynaa.
Nin gumaysi jecel waa dhilo oo kale dhilayso lagama karaayo.Dh2 ayaa qodobada qaar ay diideen,hadana iyagii bay soo xeliya leeyihiin.
NIN MASAYRSAN LAMA FAHMI KARO NAAG WAS LA FAHMI KARAA.
INAN GUMEED, bal ka waran AMISOM ilaalisa villa wardhiigley, AMISOM ilaalisa dekeda iyo airport xamar…ka waran AMISOM waxeey Muqdisho ku leedahay afar saldhig… xooolo baad tahay
Hanuuniye sxb caddaalada haka tagin DENI iyo AXMED MADOOBE waxaad ku qortay kenya/imaraat,
FARMAAJO IYO FAHAD YASIN Waa inaad ku qortaa QADAR/ETHIOPIA
Marka shirka villa somaliya ma waxaa loogu yeeraa SHIRKA DHILOOYINKA? ileyn Waa aragtidaade adigaa caaytamaye.
Waxba yaan kooxba koox eedeyn
Somaliya Waa la haysta hala xoreeyo dalkaan.
Sheekada waddaninimo ah lajiifiyaana bannaan waa dhammaatay. Idinka iyo Farmaajaba shalay waxaad garaaci jirteen durbaan Itoobiyaan nacayb ah laakiin maanta cadowgu waa Kenya sababta ah Axmed Islam iyo Ogaadeen bay taageertay, waxaana dhammaaday damaciinnii iyo riyadii inaad Kismaayo qabsataan. Horta, meesha ugu dhow Kismaayo ee aad degtaan sow ma aha Faafaxdhuun oo aad Ogaadeen ka saarteen idinkoo adeegsanaya awooddii Kacaanka iyo Jaalle Siyaad?
Intaad Kismaayo iyo bad ku riyoonaysaan baa qorraxdu galbeed kasoo bixi doontaa. Toban sano ayaad Kismaayo haysateen intaad Mooryaantii Xamar soo wadateen. Maxaad kusoo kordhiseen oo aan ka ahayn inaad dhirtii dhuxul u shiddeen oo degaankii xaalufiseen?
Tan kale, sow kama kortaan inaad shakhsi aan xikmad ku shaqaynayn dabagashaan si indhola’aan ah? Soddonkii sano miyaan cibroqaadasho idiin kordhin? Waa ogahay inaan aqlabiyadda Marreexaan — gaar ahaan reer Gedo — taageersanayn ahbalka Villa Somalia ku oodan. Afartii sano ee uu xukunka hayey ma booqday Gedo? Muxuu u booqanwaayey? Ma fuleynimaa? Shaki la’aan waa cuqdad uu Marreexaan dhexdiisa ka qabo. اليس منكم رجل رشيد؟
Madaxweyne Deni waxaad ku tilmaantay wan! Taas shalay baan ka hadlay oo ku noqonmayo. Waxaan filayaa inaad akhrisay jawaabta aan siiyey Dinka-dii ( South Sudan tribe) kasoo caytamaysay Gedo.
Farmaajo isagoo lixdan jir ah ayuu madaxa iyo shaaribka madoobaystaa! Timaha ayuu tallaashay! Ragga xarfaanta ah sida Xasan Sheekh iyo Khayrre waxay u isticmaalaan makeup-ka si ladifan oo aan la dareemi karin. Xitaa Mursal eeg xeeladda uu sameeyo; timaha intuu madoobeysto ayuu labada dhafoor cirradooda u daayaa. Dadku waxay u maleyn karaan in cirradu labadaas dhafoor keliya ka gashay. Farmaajo wuxuu marsadaa oo islaantiisa ka hambeystaa ‘Diana-da’. Wallaahi waxaan dareemaa yaxyax marka Madaxweynaha Somalia oo cid walba ogtahay da’diisa uu meel walba la taagan yahay muuqaal ‘fake’ ah oo xitaa bisaduhu fahmi karaan. Waa ‘wax work’. Taasi waxay ka tarjumaysaa shakhsiyaddiisa daciifka ah iyo isku-kalsooni la’aan.
Ugu dambeyn, Puntland ilaa shirkii Carta ilaa kahor ayey u dagaallamaysay inay ka mid noqoto Somalia federal ah oo degaan walba arrimihiisa hoose maamusho. Degaan, beel, amase shakhsi ay baryeyso ama wax uga baahan tahay majiro. Waxay ku doodaysaa Soomaaliyey aan wax isku darsanno oo wixii ina ka dhexeeya ku maamulanno, kuna qaybsanno si aan ku heshiinnay oo raalli isaga nahay, wixii inoo gaar ahna aan isku ixtiraamno. Farmaajo kahor ayey sidaa ku doodaysay, isaga kadibna way kusii doodi doontaa. Marka, qoladii amase shakhsigii mowqifka amase doodda Puntland u qaata in isaga amase iyaga loola jeedo, iyagaa gudcur indho ku taagi doona.
@A.Arar kkkk maya meesha ugu dhow een degnaa waa Kismaayo Beerxaani,Shinbiroole,
Haddiise aan kuu raaco adiguse sow meesha kuugu dhow ma ahan Waqooyiga Gaalkacyo ama Qabridahare.
Kismaayo haddii aanan marti kuugu ahayn ood leedahay waa la wada degan yahay sow guul ma ahan.
Ogaadeen waad waalaysaan Somaliya Ogaadeen waxaa ay ka mid yihiin laangaabyada Kenya iyo Ethiopia ayaa hadda lagu baruurugayaa tiradooda.
Farmaajo Kismaayo uma socone nin localka oo Cawlyahan ayuu watay Axmed madoobe ma ahan degaan M.Zubeer waa 5%Ogaadeen Somaliya.
Somslita Federal kama jiro,waxaa ka jira fowdo.
Ma ahanvin guddoomiye laga soo magacaabo Garawe Baydhabo Kismaayo etc waxay ahayd in iyagu soo doortaan laakiin Gabre ayaa Jubaland qaribay.
@Shaagic kkk INAN GUMEED maba fahmo Pro Gaandi oo sharaxaaya ayaa yiri waa inankii Gun ama asalka ahaa.
Adigu ZINJIBAAR iska ahow aniga gunimada ii daa
MJ HOSPITAL DADKA WAALAN BAAD U BAAHAN TIHIIN.
Anshaxa iyo Asluubta golaha halla ilaaliyo; waa DIGNIIN MADAXWEYNE! Siyaasi isku sheeg kastaana KHAANAD buu ku jiraaye yeynaan khaanadaha isku furfurin.
Haddaan u soo noqdo, waa mmacquul in BIL-SADDEX oo dhammi ay dhinac isu raacaan iyaga oo ilaashanaya dantooda khaaska ah. Laakiin waxa ay cid walbaahi ogtahay in doorashadani ay tahay doorasho heer federaal ah, ee aysan ahayn doorasho heer BIL-SADDEX.
Waxa kale oo aannu ognahay in ay hoostagaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Federaalka. Yaa marka siiyey awoodda intaa le’eg ee ay kula gorgortamayaan madaxtooyadii qaranka, iyaga oo ka duulaya arrimo heer fedraal ah?! Haddiiba ay jidho tabashooyin ay ka qabaan hannaanka doorashooyinka iyo doorka ay ka qaadan karaan, waxa ay ahayd in ay kala naqaashaan wasiir QAEFAAN, inkasta oo la’layahay meel uu jaan iyo cirib dhigay.
Sideedaba arrinka loo fadhiyaa haddii uusan jiho lahayn jaha-wareer kama baxo. Meeshan wax aan isqaadan karin baa la rabaa in lays qabadsiiyo, sidaana waxba kuma hagaagayaan. Qaar madal isku sheegay oo isku beel u badan meelbay ka qaylaayaan, oday dhaqameedyo beelaytsan meel bay unukaa iska leh ku haayaan, kuwo bulsho rayid isku sheegay meelay ka qaylaayaan, kuwo heritage isku sheegay meelay ka qaylaayaan; waar hallaysku xishoodo sidaan si maahane.
Waxa dad badni qabaan in arrinka doorashooyinku uu yahay mid aysanba mudnayn in waxan oo shir ah iyo waxan oo iska daba wareeg ah ba la sameeyo iyada oo uu dhisan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee heer federaal oo dastuuriya.
Shaqadan loo fadhiyo iyaga ayaa iska leh, maxaa looga qaadayaa?! Shan sanay dhisan yihiin, waxaa ku baxay kharash, wakhti iyo dedaal farabadan. Soojeedin bay baarlamanka ka horsameeyeen. Maxaa loogu dhaqmi waayey? Maxaa iska daba wareegga keenay? Yaa ka danbeeyey in la qaadan waayo soojeedintoodii quruxda badnayn ee qodobaysnayd ee muddaysnayd?
Farmaajay la jiraan baa qolo lahayd; waar Farmaajo wuu ka horreeyey guddigani. Gabadha guddoomiyaha ka ahna isku beelba ma aha isku danna ma noqon karaan. Muddo kororsi baa la wadaa baa lagu eedeeyey. Haddii aan la isba aaminayn, sidee horay loogu socon karaa?
Hal hayskeennii hannoo danbeeye e, waxa aan anigu soo jeedin lahaa in soojeedintii guddiga madaxa bannaan dib loogu noqdo. In iyada lagu dhaqmo oo raalligelinna la siiyo guddoomiyaha guddiga iyo dhammaan guddiga madaxa bannaan sida wanaagsan ee xilkasnimada leh ee ay hawshoodii uga soo baxeen.
Haddii guddigii hawsha loo xilsaaray lagu kalsoonaan waayey, saw hallaysku meeraysto maaha. Yaase adiga kuu xil saaray? Maxaa maamullada beelaha soo geliyey doorashooyin guddigii loo xilsaaray soo taagan yihiin? Saw maaha boob cad oo lagu samaynayo hay’aadkii dastuuriga ahaa?
Gunaanadkii, waa maan guracan iyo garsho jaan waxa meesha lagu hayaa. Ninkii indhaha la’aa waxa uu yiri wax uun baan dhawri. Arrinka haraggiisii hallagu celiyo; guddigii doorashooyinka hallagu celiyo; ummadda jaha-wareerka hallaga daayo. Yuusan arrinku naga noqon, “inta aan DAHABEEY ku day dayayey miyaa DAYAXII daruur galay.
Waa hal hayskeeniiye, SSC aniga ayaa iska leh (The Darwiish). Garoowe ima metesho; barakace ima metelo; qaswade ima metelo; gacan ku dhiigle qudhmis ahi ima metelo; khaa’inul waddan ima metelo. Halla ii oggolaado in aan codkayga si xor ah oo xalaal ah u dhiibto. Waa xaq dastuuri ah oo uu muwaaddinku leeyahay. Wbt
NIDAAM, NIDAAM, NIDAAM
MIN FATLIKUM NIDAAMKA ILAALIYA,